Barta Twitter ka Hey’adda W.H.O. Oo Soomaalida Ethiopia Loogu Gafay!! – War La Helaa Talo La Helaa
Barta Twitter ka Hey’adda W.H.O. Oo Soomaalida Ethiopia Loogu Gafay!!
By Jiinoow	 On Aug 12, 2018
Bogga Twitter-ka ay ku leedahay ha’yadda caafimaadka adduunka ayaa fadeexad ka dhatalay kaddib markii mid kamid ah shaqaalaha ha’yadda uu kusoo qoray qoraal uu ku aflagaadeynayo qof shakhsi ah oo aragtidiisa ku qoray bartiisa gaarka ah.
Qofka loo jawaabay ayaa markii hore bartiisa gaarka ah ku yiri “dadka dhibaatada ka wado dowlad deegaanka soomaalida ee Itoobiya waxaa maalgelinaysaa dowladda federaalka Itoobiya”.
Qof aan la magacaabin oo isticmaalay barta Twitter ee hay’adda caafimaadka Adduunka WHO xafiiskeeda Itoobiya ayaa si filanwaa ku noqotay dadka bartaas ku xiran ugu soo qoray hadal qadaf ku ah qofkii aragtidiisa qoray.
“Beenlow! Si fiican ayaad u ogsoon tahay cidda malgelisa ciyaal suuqa. Xaqna uma lihid in aad u nisbayso xukuumadda federaalka adigoo xigasho dhex galinaya” ayaa lagu qoray barta WHO Ethiopia ay ku leedahay Twitter.
Qoraalkan ha’yadda WHO wuxuu u horseeday in lagu eedeeyo inay faraha la gashay siyaasadda dalka Itoobiya.
Ha’yadda caafimaadka adduunka ayaa ka qoomamaysay qoraalkan oo ay ku sheegtay inuu ka dambeeyay qof kamid ah shaqaalaheeda oo fikraddiisa ku cabbiray.
WHO waxay sidoo kale sheegtay in qoraalkani uu khalad yahay ayna baaritaanno ku samayn doonaan dhacdadaasi.
Ugu dambayn ha’yadda caafimaadka adduunka waxay sheegtay inay dhexdhexaad ka tahay arrimaha siyaasadda.
Dowlad deegaanka soomaalida ee Itoobiya waxaa dhawaan ka dhacay rabshado ay dad badna ku dhinteen kaddib markii militariga federaalka Itoobiya ay la wareegeen magaalada Jigjiga.
Rabshadahaasi waxaa lagu gubay Kansiido iyo bililiqo loo gaystay bangiyo ku yaalla halkaasi.
Waxaa xilka ka degay madaxweynihii dowlad deegaanka Cabdi Maxamuud Cumar, wuxuuna xilka si kumeel gaar ah ugu wareejiyay Axmed Cabdi Maxamed.
Erdogan Oo Ku Hanjabay In Ay Joojin Doonaan Isticmaalka Dollar ka Amerikaan ka
AKHRISO:- Min Bilow Illaa Dhammaad Taariikhda Golaha Dhaqaallaha Qaranka